မွေးနေ့အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပန်း-အဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မွေးနေ့အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပန်း-အဆက်
Posted by ခင်ခ on Jul 31, 2012 in My Dear Diary | 8 comments
“ Happy Birthday ´´ လို့အော်လျှက် ကပ်ထားတဲ့ ပန်းစည်း လေးကိုလှမ်းအကြည့်မှာ ပန်းစည်းလေးနေရာမှာ စာရွက်လေးတစ်ရွက် အစားထိုးဝင်ရောက်ကပ်ထားတာကိုဘဲ တွေ့လိုက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ မာမီစံတစ်ယောက် “ ဟောတော့——´´ ဆိုပြီး စာရွက်လေးမှာ ရေးထားတဲ့ စာကိုဖတ်ဖို့ စာရွက်အနီးတိုး၍ ဖတ်လိုက်တယ်။ စာမှာရေးထားတာက ———။
မာမီ ခုနလေးကမှ သူငယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းပြောရင်း ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ မွေးနေ့က မနက်ဖြန်ဆိုတာသိရလို့ လက်ဆောင်ပန်းဆိုင်တွေဖွင့်သေးလား လိုက်ကြည့်တာ ဘယ်ဆိုင်မှမဖွင့်တော့လို့ မာမီဆိုင်ရှေ့လိပ်တံခါးကို စိတ်ပျက်ပြီးမှီထိုင်လိုက်တာ၊ လိပ်တံခါးက အပေါ်ကိုကြွ သွားတာနဲ့ မာမီမပြန်သေးဘူးဆိုပြီး လိပ်တံခါး မပြီး ဆိုင်ထဲကြည့်မိတော့ မီးပိတ်ထား တာတွေ့ရတုံး မှန်မှာကပ်ထားတဲ့ ပန်းစည်းအသစ်လေးမို့ ယူသွားလိုက်ပြီနော်။ မနက်ဖြန်မနက်ဆိုင်ဖွင့်မှ ပန်းဖိုးလာပေးရင်း မာမီကိုတောင်းပန်တော့မယ်၊ လိပ်တံခါးတော့ပြန် ချခဲ့ပါမယ်။ ဒါနဲ့ မာမီ လိပ်တံခါးကဘာလို့ သော့မခတ်တာလဲ။ ကျေးဇူးဘဲ မာမီရေ။
မာမီစံ လည်းစာလေးကို ဖတ်ပြီးဖြုတ်ယူလိုက်ရင်းနဲ့ “အမလေး ငါ့ဘ၀ကလည်း၊ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပန်း စည်းပေးမယ့်သူမရှိလို့၊ ကိုယ့်ဖာသာပေးတဲ့ ပန်းစည်းတောင် ကိုယ်အတွက်မဖြစ်ဘူး၊ သူများအတွက် ပြင်ပေးတာဖြစ်ရသတဲ့၊ စိုးလိုက်နာနော်၊ တော်ပြီ ရွှေကျီးမြင်ဘုရားသွားပြီး ပန်းကပ်ပြီးဆု သွားတောင်း ဘဲကောင်းတယ်´´ လို့ မြည်တွန်၍ လိပ်တံခါးပြန်ဆွဲချနေတုံး၊ “မာမီ ဒီနေ့ဆိုင်ဖွင့်တာစောတယ်၊ အတော်ဘဲ သားက မာမီဆိုင် မဖွင့်လောက် သေးဘူးထိုင်တော့ စောင့်နေရပြီထင်တာ၊ ပေး သားကူဖွင့်ပေးမယ်´´ ဆိုပြီးကောင်းလေးက လိပ်တံခါးကိုအပေါ်ကိုပြန်မ မာမီစံက “ ဟဲ့ ကလေး ဆိုင်မဖွင့်သေးဘူး ပိတ်တာလို့´´ ပြောပြီး လိပ်တံခါးပြန်ချ “ မာမီကလည်း ဖွင့်လိုက်ပါ ဒီနေ့က သားရဲ့ကောင်မလေးမွေးနေ့လေ အခုကွန်ပျူတာသင်တန်း ၇ နာရီက ၉ နာရီ တက်နေတာ၊ သူသင်တန်းဆင်းရင် ပန်းစည်းလေးပေးရင် လျှောက်လည်ဖို့ခေါ်မလို့ ဖွင့်လိုက်ပါမာမီနော်´´ ဆိုပြီးကောင်လေးက လိပ်တံခါးပြန် တင်နဲ့ အဲဒီမှာ “ မာမီဘုရားခဏသွားမလို့ ပြီးတော့လာ ဖွင့်ပေးမယ်နော်´´ ဆို၊ ကောင်းလေးက “မာမီရယ်လုပ်ပါ ကျူရှင်ဆင်းတာနဲ့ ပေးချင်လို့ပါဆိုနေ´´ ဒါနဲ့ဘဲမာမီစံမှာ “ ဖွင့်တော့ဟာ´´ ဆိုပြီးဆိုင်ဖွင့်လို့ ကောင်းလေးအတွက်ပန်းစည်းလေးလုပ်ရောင်း၊ နောက်ပန်းစည်းဝယ်သူတွေ ရောက်လာ ဒါနဲ့ မာမီစံ တစ်ယောက်လဲ အလုပ်လေးတွေကြားထဲလုပ်နေရင်း ထိုနေ့ညဖက်ဆိုင်ပိတ်ပြီးတော့မှ အောင်တော်မူဘုရား သွား၍ ဘုရားကိုပန်းကပ် ဆုတောင်း လုပ်ရကြောင်းလို့ ပြောပြခဲ့တာပေါ့။
ကျွန်တော်လည်းသူပြောတဲ့ သူ့အကြောင်းလေး နားထောင်ရင်းစောင့်ခဲ့တာ ကျွန်တော်မှာတဲ့ ပန်းခြင်းလေးပြီးပြီမို့ ကျသင့်တဲ့ငွေရှင်းပြီး မာမီစံကို နှုတ်ဆက်ကာ ဆိုင်လေးမှထွက်ခဲ့လာပါတော့တယ်လေ။
ကျွန်တော့်အခုတလောရေးတဲ့ပိုစ့်တွေက ရွာသူားတွေ Log in ၀င်ပြီးဖွင့်ဖတ်ရင်ရပြီး၊ Log in မ၀င်ဘဲဒီတိုင်းဖွင့်ဖတ်ရင် 403-Forbidden You don’t have permission to access /rules-for-writers on this server လို့စာသားပေါ်ပြီးဖွင့်မရပါဟု သိရပါကြောင်း၊ အဲဒါဘာကြောင့်ပါလဲ သိပါရစေ။ လုပ်ပါအုံးသူကြီးရယ် ကျေးဇူးပါ။
နားလည်မှု နဲ့ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု့ ယှဉ်ကြည့်မိတာပါလို့
မွေးနေ့အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပန်း-အဆက် – တို့မှာဖြစ်နေတာပါ။
အများအတွက် အလုပ် လုပ်တဲ့သူ အောင်မြင်သွားချိန် ကိုယ့်တွက် အချိန်မရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်
မောင်လေး မောင်ပေ အဖြေမှန်ပါတယ်ကွယ်၊
မာမီ တစ် မှတ်ပေးလိုက်ပြီနော်။
All Categories အောက် က Thakhin: CJ Only မှာ Members Only ဖြစ်နေလို့ ဖြစ်မယ် ထင်ပါသည် ။
စိဗိုက် ပိုစ်မှာ အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဦးပါမေးထားသည်ကို သူကြီးဖြေထားတာ တွေ့ပါသည်။ ကိုခင်ခ edit ပြန်ခေါ်၍ ကြည့်ကြည့်ပါ။
ပန်းစည်းပြင်နေတဲ့ မာမီစံ ကို မြင်ယောင်မိပါတယ်…
ဆိုလို့ပြန်ခေါ်ပြီး ကြည့်ကြည့်ပါတယ် Thakhin: CJ Only အကွက်တွေမှာ ဘာမှရွှေးမထားပါကြောင်း၊
login မ၀င်ဘဲ မြင်သွားပါပြီ။ အရီးလတ်ပြောသလို Post Level Restriction? မှာ level ရွေးထားလို့ လား ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မရွေးဘဲဆိုရင်တော့ သူကြီး ဆာဗာ အဆော်ခံရပြန်ပြီလား မသိ ..
စိဗိုက် ပိုစ်မှာထဲက သတိထားမိတာ .. စိဗိုက် က ကလိတတ် သူမို့ တမင်လုပ်ထားတာလို့ ထင်နေတာ .. :grin:
ဟယ်…. မာမီစံဆိုင်ကအရမ်းရောင်းကောင်းတာပဲနော် …….. သူ့ဇာတ်လမ်းလေးက တစ်ကယ့်ကို နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲနော် ….. တိုတိုပင်လယ်ပျော်ကလော့အင်ဝင်ထားလို့ ကြုံတုန်းဝင်မန့်လိုက်တာ လော့အောက်မထွက်တော့ပဲနဲ့ … ဟိုနေ့ကတည်းကတိုးလိုးတန်းလန်း ဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ချင်နေတာ အခုတော့အဆုံးသတ်သွားပြီပေ့ါနော် ……..